राष्ट्रपति निर्वाचन : १८ सांसद जसले भोट हालेनन्, ४ सांसद जसले हाल्नै पाएनन्
Tuesday, 13 Mar, 2018 4:27 PM
२९ फागुन, काठमाडौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा संघीय संसद्का पाँचजना सांसद अनुपस्थित भएका छन् ।
१८ सांसद जसले भोट हालेनन्
निर्वाचन आयोगका अनुसार संघीय संसद्का कूल ३३१ सांसदमध्ये डा बाबुराम भट्टराई, जितेन्द्रनारायण देव, प्रेम सुवाल, रमेश यादव र रेशमलाल चौधरी अनुपस्थित रहे । ३२६ ले मात्रै मतदान गरे ।
यस्तै, प्रदेशसभातर्फका कूल ५४९ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ५३६ जनाले मतदान गरेका थिए । १३ जना प्रदेशसभा सदस्य मतदान प्रक्रियामा अनुपस्थित भए । मतदान प्रक्रियामा अनुपस्थित हुने प्रदेशसभा सदस्यमा कृष्णबहादुर चौधरी, धनमाया लामा पोखरेल, प्रल्हाद गिरी, प्रेम तामाङ, विराजभक्त श्रेष्ठ, मनिषकुमार सुमन, रमेश पौडेल, दिन पन्त, शोभा शाक्य, सुरेन्द्र गोसाई, हरिशरण आचार्य, हिमबहादुर शाही र सिर्जना सैँजु छन् ।
४ सांसद जो उपस्थित हुनै पाएनन्
यसैगरी, ज्यान मार्ने उद्योगमा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर दिपक मनाङ्गे प्रदेश सभामा निर्वाचित भएपनि मतदान गर्न पाएनन् । यसबाहेक सरकारले राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेका डा. युवराज खतिवडा, रामनारायण विडारी र डा. विमला पौडेल पनि मतदानमा सहभागी हुन पाएनन् ।
यसरी संघीय संसद तथा प्रदेश सभाका गरी कूल ८६२ मत मात्रै खसेको छ ।